Home Ugbo elu ụgbọ elu GPS triangle tactics equipment technical article PowerBox Pioneer iGyro Sat, uru, uru, arụmọrụ abụọ BEC na LiFePo akụkụ 1
Video gara aga TOP PACE - FULL FULL, ụbọchị zuru oke na Tannenalm.at
Video nke ozo HISPANO AVIACION HA-200 SAETA EADS DEUTSCHLAND GMBH AIRSHOW Flight ILA BERLIN AIR SHOW
[Mkpokọta: 27 Nkezi: 5/ 5]
Nyocha ule nke 1 Powerbox ọsụ ụzọ: uru, uru nke sọrọ arụmọrụ BEC, imeghe ebe a!
Nkwupụta ule kwadebere site na:
1. Ihe kpatara oganihu:
Mgbe ihe ịga nke ọma 2020 na klas egwuregwu triangle GPS, nhazi nke ugbu a, lee foto site na foto foto ahụ, site na ahụmịhe na 2020 chọrọ nyocha a na-atụghị anya ya maka 2021 tupu GPS triangle World Cup 2021 na-abịanụ.
Ogwe nke Calvados nke pere mpe pere mpe juputara na olu.
Site na mbipụta 3-D, emere nhazi maka ezigbo ike ndọda maka ntọala 2019/2020 na fuselage dị ka ndị a:
- PowerBox Systems Expander na PBR-26D abụọ ejikọrọ (26 ọwa ntanetị 2.4GHz)
- Nweta ike site na BEC YGE SPEED CONTROLLER YGE95 LVP WITH PRPELLER POSITIONING (Florian Schambeck)
A na-enye onye na-agba ọsọ ọsọ maka draịva na maka BEC (nnata ike nnata) ya na SLS APL MAGNUM 2650MAH 6S1P 22,2V 45C / 90C.
- Maka triangle GPS, ugo si RC-Electronics arụnyere na poolu redio na antenna GPS.
Emebere ntọala a n'ime obere obere warara nke Calvados.
Site na batrị 2650 mAh dị arọ nke nwere 430 g, enwere ike ịnweta atọ site na efu ruo mita 400.
Ihe dị ka 400-750 mAh riri otu ịrị elu ruo 820 m.
Ejiri nrụgide dị elu jupụta na nnukwu ihe, nke mere na etiti nnukwu ndọda kacha mma.
N'afọ a, e lebara anya na nke kacha mma ka ntọala dị mma ugbu a maka atụmatụ ikpeazụ.
Site na isi ihe a chọrọ maka ezigbo elekwasị anya, nhazi ọhụụ na kachasị maka ime Calvados ka emezigharị na Pioneer ọhụụ ewepụtara dị ezigbo mkpa.
Ka anyị buru ụzọ kwuo maka ọghọm nke nhazi izizi a sitere na 2020, ọ bụrụ na mmadụ ga-ekwu maka ọghọm ma ọlị.
Ihe ọghọm nke nhazi a site na afọ 2020 bụ na batrị draịva na BEC na-eji ike servos niile na a na-enye usoro ntinye aka na batrị site na njikwa YGE. Enwere ihe egwu na nnụnụ ahụ nwere ike daa ma ọ bụrụ na onye na-achịkwa dara ada ma ọ bụ ghara ime ya.
Ọ bụ ihe a maara nke ọma na ọ bụrụ na fuselages enye enweghị ma ọ bụ naanị ntakịrị ikuku ventilashion, n'ihi echiche nke echiche ikuku, ihe elektrọnik e wuru na-adị ọkụ nke ukwuu.
Nsonaazụ na-abụkarị na eletrọniki dara na njikọ kachasị ike na-enwekarị bụ onye nchịkwa ọ bụghị batrị na moto.
MULTImate V1.42 site na MULTIPLEX Modellsport Video Test Report - Nnwale zuru ezu
N'oge gara aga, n'onwe ya na ndị ọzọ na-anya ụgbọ elu n'ụdị ihe atụ yiri ya na ihe mkpuchi mechiri emechi, ndị njikwa ahụ gbara ọkụ n'usoro mgbe ha nwere nrụgide dị ogologo na-enweghị nkwụsị. O nweghi ihe o mere ma ndị a bụ ndị “enweghị aha” ma ọ bụ ndị na - ejikwa akara dị elu, ndị njikwa niile dara ma ọ bụ gbaa ọkụ n'ihi ezughi oke.
N'ime ụgbọ elu ndị a, a naghị eji BEC maka ọrụ RC, mana ọ na-enye ike ọkụ abụọ, otu ugboro maka draịva na otu ugboro maka nnata na nnyefe servo, ma ọ bụghị na ha ga-akụ.
Na PowerBox Pioneer ọhụrụ, nke fọrọ nke nta ka ọ hà ka Powerbox Expander, Pioneer nwere ntinye HV abụọ na telemetry dị ka ọnụọgụ abụọ HV. Nke a dị mma na arụ ọrụ ma enwere ike ịkpọ ya site na telemetry maka Futaba, Jeti na Core maka data ahụ.
Site na ntọala ọhụrụ na 2021, ike izizi mbụ na-abịa site na BEC achịkwala njikwa yana a na-enye ya nri site na batrị draịva.
Ike nke abụọ na-enye site na opekata mpe batrị Li / 750 mAh LiFePo 1000/XNUMX (imeghari na onye na-eri ihe na ihe nlereanya maka ikike mAh).
Uru nke abuo bu na batrị LiFePo (ntinye ntinye nke mbu) enwere ike itinye ya na etiti ike ndọda ya na obere batrị draịva dị ka mgbakwunye agbakwunyere nke BEC dị ugbu a nke 5.5 ruo 8,3 V nwere njikọ nke abụọ na Pioneer.
Na ụyọkọ kpakpando a nke batrị ọkụ na imi na ike na-enweghị ike na batrị nke abụọ, nke dị na etiti ike ndọda, ọ ga-ekwe omume ugbu a na ibu dị na rudder belatara na efu. Nke a pụtara na ezigbo ibu nkesa na kacha nta na-apụ apụ bụ ìhè “dị oke”.
EE, 250-300 g obere ibu ibu bụ ụwa na klas GPS triangle ihu igwe. Nke a na - eme ka igwe ọrụ dị elu nke ukwuu na ọkụ na-adịghị ike.
Site na obere imewe a, Powerbox Pioneer na-enyere ọtụtụ ọrụ aka HV abụọ n'ụzọ dị omimi na obere oghere dị oke ma sie ike, dịka ọ bụ Calvados si Baudis maka atụmatụ kacha mma gụnyere Raven, antenna na GPS antenna .
3. EGO - EFFEKT, abụọ sọrọ BEC na LiFePo na ndị ọsụ ụzọ:
Ajụjụ bilitere ugbu a banyere otu Onye Ọsụ processeszọ si arụ ọrụ iyi abụọ dị iche iche.
BEC na-enye mgbanwe dị ugbu a n'etiti 95-5,5 V site na YGE8,4 LVP.
Batrị LiFePo nwere volta ngwụcha ụgwọ nke 2 × 3,65 V nhatara na 7,3 V.
DOGFIGHTER MULTIPLEX RC RACIR AIRCRAFT VIDIO AKWPKWỌ AKW "KWỌ "AKWIGHTKWỌ AKW /KWỌ / 3."
N’adịghị ka ụfọdụ ngbanwe ndị ọzọ sitere na PowerBox, a na-eme teknụzụ nke Ọsụ thatzọ ahụ n’ụzọ nke na a na-ebu ụzọ belata volta dị elu na ntinye nke ugbu a na ọkwa ọkwa tupu emetụ voltaji na ntinye na-esote ya.
N'ikpeazụ, nhapu ahụ na-ewere ọnọdụ n'ụzọ dị nro na n'akụkụ abụọ ọ bụghị n'oge gara aga na voltages dị iche iche etinyere na ntinye abụọ ahụ.
Onye ọkachamara ugbu a na-amata atụmatụ kachasị mma na arụmọrụ nke arụmọrụ abụọ na Powerbox Pioneer.
Mbụ dị iche iche:
Oge a na - agbanwe agbanwe oge niile site na BEC na - eri nri karia ngwụcha ngwụcha ụgwọ batrị LiFePo, nke mere na ọ na - adọta ugbu a na BEC
Ọ bụrụ na nke ugbu a site na BEC daa n'okpuru njedebe njedebe nke batrị nke 7,3 V, obere batrị LiFePo na-agbapụta.
Nke abụọ dị iche:
Ugbu a sitere na BEC na-ahapụ ala karịa volta ngwụcha ụgwọ nke batrị LiFePo, yabụ na mbụ volta njedebe na-ebelata site na batrị wee "na-agbanwe" na nke mgbe niile site na BEC.
N'ihi na BEC na-anọgide na-adịgide adịgide, LiFePo anaghị ebido ọzọ ruo mgbe batrị draịva gbadara na voltaji, ebe a ọ dị mkpa ị attentiona ntị na ozi kwekọrọ na batrị batrị na-ada n'okpuru sel voltaji. N'ihi na BEC ga-ezu oke elu n'ihe metụtara volta nke mere na enwere ike ịdọrọ nchekwa zuru ezu na batrị ahụ.
Nke atọ dị iche:
Ugbu a sitere na BEC bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. 0,2 V dị ala karịa volta nkịtị nke batrị LiFePo, ya mere batrị na-ebu ụzọ belata na volta ngwụcha ngwụcha wee weta ihe na-agbanwe agbanwe site na BEC.
Ajuju bilitere ugbua banyere otu esi gha ahukari usoro ihapu na, ma oburu na odi nkpa, weputa ya site na ihe ngosi ma oburu na uzo izo aka na nti ahu.
PowerBox Pioneer bụ teknụzụ 100% nwere ike iji usoro site na Futaba, Jeti na PowerBox Core (lee ntuziaka na weebụsaịtị ndị nrụpụta). Enwere ike ịme mmemme ahụ site na PowerBox Core (ikekwe Jeti, Futaba), biko gụọ ntuziaka maka ndị ọsụ ụzọ.
Site na telemetry, ntinye na oriri ugbu a nwere ike ịkpọ ozugbo dị ka ọnọdụ dị ugbu a, nke mere na a na-ahụ ya mgbe niile ka nhapu ahụ na-aga n'ihu na mmiri iyi na ntinye abụọ. Site na ịtọpụ ụzọ ụzọ ịdọ aka ná ntị dị iche iche, ụwa nke nlekota akpaka na-emeghe ma n'otu n'otu mepee nhazi ahọpụtara.
BEC dara, enweghị ike na ntinye na batrị LiFePo na-agbanye kama.
Telemetry ahụ na-ada na ọnụ ụzọ BEC na ndị ọsụ ụzọ ahụ n'ihi ya, anyị makwaara na ndị ọzọ LiFePo ka ga-abanye n'enweghị nsogbu.
Habu site na akụkọ nnwale vidiyo Horizon Hobby - nkwubi okwu owuwu
A na-eji ọkụ eletrik arụ ọrụ ma ọ bụrụ na enwere ọnụ ụzọ mbata maka mkpokọta oriri, a na-echetara mmadụ ma nwee ike ịda n'oge na-adịghị anya.
A ghaghị ime batrị LiFePo jikọtara ya n'ụzọ nke na ihe nlereanya ahụ na ndị ahịa niile na servos na-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke, ọbụlagodi na oke oke achọrọ. Ya mere, nhazi maka batrị mAh kacha nta dị mkpa maka nchekwa. Agaghị ewepụtacha nke a iji nwee ike ịnwe ikike idobere ihe.
5. Mmechi na ule ule akụkụ 1
Site na atụmatụ a, a na-enweta ihe kachasị mma dị arọ nke dị warara ma dị warara, yana nchekwa dị elu nke ike HV na-enweghị isi site na BEC na batrị nke abụọ.
Njikọ telemetry maka PowerBox Core, Futaba na Jeti na-eme ka nlekota ahụ dị mma ma na-akpaghị aka ma anyị nwere ike iji udo nke obi na-elekọta ụgbọ elu ahụ.
Oge ụgbọ elu kachasị maka ike batrị dị ugbu a site na iji BEC na obere maka ọnọdụ asọmpi. Batrị LiFePo, bụ nke nwere akụkụ zuru oke maka ndị na-eme ihe ahụ (servos na ndị na-azụ ahịa), nọ na nchekwa ugbu a na BEC site na PowerBox Pioneer. Site na ntọala a maka 2021, dabere na ahụmịhe na 2020, ntọala ọhụrụ maka 2021 World Cup ka kachasị nke kachasị n'ihe gbasara nchekwa, ịdị elu ụgbọ elu na nkesa oke.
Ibu nkesa na Calvados nwere ike iji echiche a na ụdị ndị yiri ya ka Mbelata ibu na njikarịcha arụmọrụ Kpamkpam emejuputa.
Onye ọsụ ụzọ PowerBox nwere njikarịcha a ọkachasị site na njikwa nka dị nkọ site na ntinye abụọ HV naanị mere ka o kwe omume na kọmpat imewe.
BGH on B PART N'PARTLỌ NKE abụọ nke akụkọ nyocha ahụ:
Na akụkụ nke abụọ nke akụkọ nyocha ahụ, a na-atụle nhazi ahụ n'ụzọ zuru ezu na ihe atụ bara uru. Na olile anya na nhazi mbipụta nke 2021D ga-adị njikere na 3.
Bọchị mwepụta: Winter 2020.
Olileanya na nyochaa zuru ezu bụ ihe na-atọ ụtọ, nye akara mmuke ise ma kesaa post a nke a sụgharịrị n'asụsụ 100 nye ndị enyi gị
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nkwupụta, biko hapụ otu okwu na ibe a.
Stephan Eich gị
N'okpuru ebe a bụ foto nke nhazi nke ugbu a site na 2020, nke a ga-agbanwe ka ọ bụrụ akụkụ 2.
niile Ntọala ochie 2020 na otu batrị na BEC
Tags ụgbọ elu ikuku na-achịkwaGPS triangleNgwa GPSIGIroIGyro SatModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenuỌR.Sistemụ PowerBoxRCụgbọ elu rcrc nlereanyaTaktikNyochareviews